पुरानो ग्रीस मा ग्रुमिंग र शरीर हेरचाह Absolut यात्रा
प्राचीन ग्रीसमा कोठा र शरीर हेरचाह
पुरातन शास्त्रीय दर्शनको सिद्धान्तहरू अनुसार ग्रीसको नैतिकता सौन्दर्य र शरीरको देखभालसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यो बेला, एक राम्रो नागरिक हुनु को पर्यायवाची एक राम्रो हेरचाह शरीर थियो र राम्रो प्रशिक्षित। सद्भाव र एथलेटिक निकायहरूमा आधारित सुन्दरताको पुरानो आदर्श प्राप्त गर्न पुरुषहरूले जिमहरूमा घण्टासम्म व्यायाम गरे।
ग्रीकहरु, एक गहन व्यायाम कार्यक्रम को माध्यम बाट आफ्नो शरीर राम्रो शारीरिक स्थिति मा राख्नुको अलावा उनीहरूले व्यक्तिगत स्वच्छताको बारेमा धेरै ख्याल राख्छन्। जिम्नास्टिक अभ्यास गरेपछि, तिनीहरूले छाला सफा गर्ने रीति अनुसरण गरे जसमा सुन्दरताको पंथलाई उनीहरूको संस्कृतिको एउटा स्तम्भमा परिणत गर्न सकिन्छ, जसको यसको प्रभाव अन्य सभ्यताहरूमा थियो।
यस लेखमा हामीले पुरानो ग्रीसमा कोठा र शरीरको हेरचाह के समावेश थियो भनेर समीक्षा गर्‍यौं। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ? पढिरहनुहोस्!
1 प्राचीन ग्रीसमा शौचालय
2 प्राचीन ग्रीसमा सार्वजनिक स्नान
3 एथेन्सको सार्वजनिक स्नानमा महिलाहरू
4 प्राचीन ग्रीस मा महिला सुन्दरताको आदर्श
5 पुरानो समयमा कपालको स्याहार
6 शास्त्रीय संसारमा कपाल हटाउने
7 अन्य संस्कृतिहरूमा संचार गर्ने विधि
प्राचीन ग्रीसमा शौचालय
हामी एम्फोरसको पेन्टि inमा देख्न सक्छौं जुन आज सम्म जीवित छ प्राचीन ग्रीकहरू समानुपातिक र स्वस्थ शरीरको बारेमा धेरै चिन्तित थिए, त्यसैले उनीहरूले एक सामञ्जस्य र सुन्दर शरीर प्राप्त गर्न व्यायाम कार्यक्रमको माग गरे।
एम्फोरसमा खेलाडीहरू खेलकुदको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैनन् तर त्यसपछि शरीरलाई सफा गर्ने र हेरचाह गर्ने विधि पनि प्रदर्शन गरिरहेका थिए। र उनीहरूलाई उनीहरूको सौन्दर्य सामानका साथ चित्रित गरिएको थियो, उदाहरणका लागि सुगन्धित तेल भएको साना कन्टेनर जुन भित्तामा झुण्डिएका वा एथलीटहरूको नाडीमा बाँधिएका थिए।
राख, बालुवा, प्यूमिस स्टोन र गुलाब, बदाम, मार्जोरम, लैभेंडर र दालचिनी तेल व्यायाम पछि छाला सफा गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। जस्तै सफा गर्ने लोशन, कोलोनेस र डिओडरन्टहरू। उनीहरूले प्रयोग गर्ने अर्को एक्सेसरी छालाबाट थप धुलो र तेल हटाउन लामो, फ्ल्याट चम्चाको आकारको धातु डन्डा हो।
ग्रीसको पुरातात्विक संग्रहालयमा तपाईले यी जारहरू र सफा गर्ने वस्तुहरू भण्डारण गर्न प्रयोग गरिएका जारका केही नमूनाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू माटो वा अलाबेस्टरले बनेका कन्टेनरहरू हुन्थे जुन सजावटका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो र विभिन्न आकारहरू थिए।
प्राचीन ग्रीसमा सार्वजनिक स्नान
यो जानिन्छ कि ईसापूर्व XNUMXth औं शताब्दीदेखि एथेन्समा सार्वजनिक स्नानहरू अस्तित्वमा थिए, पुरुषहरू व्यायाम पछि गएका ठाउँहरू नुहाउने मात्र होइन अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्न पनि, किनभने उनीहरूलाई धेरै लोकप्रिय ठाउँहरू मानिन्थ्यो।
पुरानो ग्रीसको सार्वजनिक स्नानगृहहरू ठूला ठाउँहरू थिए जुन सयौं मानिसहरू थिए र तिनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरिएको थियो। पहिले तपाईंले पहुँच गर्नुभयो फ्रिगिडेरियम (नुहाउन र पसिना हटाउन चिसो पानी भएको कोठा), त्यसपछि यो पालोको पालो आयो tepidarium (तातो पानी कोठा) र अन्तमा तिनीहरू गए क्याल्डेरियम (सौना संग कोठा)।
त्यस समयका चिकित्सकहरूले चिसो पानी नुहाउने सल्लाह दिएका थिए किनकि उनीहरूले तन र आत्मालाई कायाकल्प गरेका थिए भने तातो नुहाउने प्रयोग गरी छालालाई सहज र आकर्षक देखिने बनाइएको थियो।
एक पटक नुहाउने विधि समाप्त भएपछि, सर्भरहरूले तिनीहरूको छालाबाट अशुद्धता हटाए र तिनीहरू म्यान गरिदिए। त्यसपछि मासेसरहरू हस्तक्षेप गर्‍यो, जसले मांसपेशिहरुमा आराम दिन उनीहरूको शरीरमा अत्तरको तेल गन्ध गर्दछ।
एथेन्सको सार्वजनिक स्नानमा महिलाहरू
पुरातन ग्रीसका सार्वजनिक स्नानगृहहरूमा त्यहाँ महिलाहरूको लागि मात्र विशेष ठाउँहरू स्थापना गरिएको थियो, यद्यपि तिनीहरू नम्र एथेन्सवासीहरू अक्सर घरका ठूला-ठूला महिलाहरूले नुहाउने गर्थे। नुहाउने क्रममा उनीहरू टेराकोट्टा वा ढु stone्गाको बाथटबहरू प्रयोग गर्थे जुन पानीले हातले भरिएका थिए।
प्राचीन ग्रीस मा महिला सुन्दरताको आदर्श
कस्मेटिक शब्द ग्रीकबाट आएको हो जसको अर्थ "शरीरको स्वच्छता र सौन्दर्यको लागि प्रयोग भएको" विशेष गरी अनुहारलाई जनाउँछ।
ग्रीक महिलाहरूको लागि सौन्दर्यको प्रतीक अभूतपूर्व सौन्दर्य थियो। सेतो छालालाई शुद्धता र जोशको प्रतिबिम्ब मानीन्थ्यो र धनी जीवन पनि यसै गरी कि कसीले छाला तल्लो वर्ग र दासहरूसँग चिनिएको थियो जसले सूर्यको काममा धेरै समय बिताउँथे।
फिक्का छाला कायम गर्न, तिनीहरू चक, सिसा वा आर्सेनिक जस्ता उत्पादनहरू प्रयोग गर्थे। तिनीहरूले आफ्नो गालामा बेरीमा आधारित केही ब्लश राखे, यद्यपि यो एकदमै हल्का श्रृंगार थियो किनकि प्राकृतिक सौन्दर्य प्रबल थियो, कम्पनी महिलाले भन्दा धेरै प्रगाढ रंग प्रयोग गर्थे।
पुरानो समयमा कपालको स्याहार
कपाल को रूपमा, दुबै पुरुष र महिलाले तेलले उनीहरूको कपाल अभिषेक गरे र तिनीहरूलाई घुमाए किनभने यस शैलीलाई त्यस समयमा सुन्दरताको सबैभन्दा ठूलो घाउ मानिन्थ्यो।। ग्रीकहरू छाल र कर्लले व्यक्त गरेको आन्दोलन मन पराउँथे। दासहरू आफ्ना मालिकका कपालहरू पूर्ण स्थितिमा राख्ने जिम्मामा थिए। वास्तवमा, पुरानो ग्रीकहरूले लगाएका केश शैलीहरू मूर्तिहरूमा देख्न सकिन्छ जुन आजसम्म अस्तित्वमा छन्।
माथिल्लो वर्गका महिलाहरू आफ्नो कपालमा रहेका दासहरू भन्दा भिन्न थिए किनकि उनीहरू परिष्कृत कपालका स्टाइलहरू लगाउँथे र उनीहरूले आफ्ना लामो कपालहरू धनुष वा ब्राइडमा जम्मा गर्थे जुन धनुष र सानो डोरीले सजाइएको थियो। शोकको समयमा मात्र तिनीहरूले यसलाई थोरै काटे। तिनीहरूको पक्षका लागि, तल्लो-स्तरीय महिलाहरूले आफ्नो कपाल छोटो लगाउँथे।
केटाकेटीहरूलाई किशोरावस्थासम्ममा कपाल बढ्न अनुमति दिइयो, जब यसलाई देवताहरूलाई चढाउन काटिन्थ्यो। पुरुषहरू कहिले काहिन् हजाममा जान्छन् र अलेक्ज्याण्डर महान पछि सम्म उनीहरूले आफ्नो दाह्री र जुँगा हान्ने काम शुरू गरेनन्। म्यासिडोनियाका राजासँग पूर्वमा भएको उसको विजयको परिणामका साथसाथै अर्को नयाँ आविष्कार पनि कपाल थियो।
पुरानो ग्रीसमा गोरा रंगले यसको पूर्णतामा सुन्दरताको प्रतीक थियो। ग्रीसको पौराणिक कथामा अचिलिस र अन्य नायकोंजस्तो हुन पुरुषहरूले सिरका, कागतीको रस र केसर जस्ता उत्पादनहरू प्रयोग गरेर कपाललाई हल्का पार्ने तरिकाहरू बनाएका थिए।
शास्त्रीय संसारमा कपाल हटाउने
शरीरको कपाल हटाउन, महिलाहरूले रेजरहरू प्रयोग गर्थे र विशेष टाँसिएको वा मैनबत्तीको साथ मोमोज प्रयोग गर्थे। पुरातन ग्रीकहरूले शरीरको कपाललाई पूर्णरूपले हटाउन एकदम महत्त्वपूर्ण ठान्थे किनकि उदासिन शरीर निर्दोषता, युवावस्था र सौन्दर्यको प्रतीक थियो।
वेक्सिंग छालालाई शान्त पार्न तेल र इत्रको साथ मसाजको पूरक थियो। यो अनुष्ठान जिस्ममा कोस्मेटीहरूद्वारा गरिएको थियो, जो कुनै न कुनै रूपमा ब्यूटी सैलुनका अग्रदूत थिए।
अन्य संस्कृतिहरूमा संचार गर्ने विधि
बाइजान्टियम, इजिप्ट र सिरियालाई कब्जा गरेर, मुसलमानहरूले रोमी र बाइजान्टिन क्रिश्चियनहरूबाट तातो स्प्रि ofको प्रेम पाउँथे।
पहिले, इस्लामिक संस्कृतिमा यो विश्वास गरिएको थियो कि हमामको तातोले प्रजनन क्षमता बढायो र, यसैले विश्वासीहरूको पुनरुत्थान। त्यसैले अरबहरूले फ्रीगिडेरियम (चिसो कोठा) बाट नुहाउनको लागि पानी प्रयोग गर्न छोडे र टेपिडेरियम र क्यालडेरियम मात्र प्रयोग गरे।
अरब देशहरूमा, हमामहरू पनि एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक जमघट थियो र तिनीहरू मस्जिदको ढोकामा उभिए। उनीहरूको बाटोबाट मन्दिरमा पुग्नको लागि तयारी र शुद्धिकरण भएको थियो।
भाग्यवस पुरानो ग्रीसमा जन्मेको र यसैले इस्लामी देशहरु द्वारा संरक्षित कोष को संस्कृति आज सम्म जीवित छ। धेरै शहरहरूमा अरब स्नानहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो छालामा यो पुरानो परम्पराको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। शरीर र दिमाग आराम र आराम गर्दै सप्ताहन्त दिउँसो बिताउने यो उत्तम योजना हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » प्राचीन ग्रीसमा कोठा र शरीर हेरचाह
नमस्कार, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? यो राम्रो लाग्छ कि तपाई यस बारे कुरा गर्नुहुन्छ
Gshcgzc लाई जवाफ दिनुहोस्
क्रूज बिदा: तपाइँको सबै सपना साकार पार्नुहोस्!